Sida loola macaamilo cabbirada coronavirus (xirida): talooyin wax ku ool ah: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 18 Maarso 2020	• 18 Comments
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa i buuxsamay su'aalo ku saabsan dillaaca coronavirus. Maxaan sameeyaa Sideen ula macaamilaa dhammaan cabirrada? Diyaar garow ayaan u sameeyaa wax walboo yimaada? Waxaan hayaa war wanaagsan. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in ay cadahay in dad aad u tiro badani ay fahmayaan in lagu ciyaarayo xaalad kacsi badan. Buuggayga ayaan ugu yeedhaa tan 'fayraska weyn ee inaga dhigaya xaqiiqooyin been ah'.
Xaqiiqda sida aan ognahay waxaa inta badan go’aamiya warbaahinta iyo siyaasada. Dad aad u tiro badan ayaa bilaabay inay arkaan taas.
Dabcan waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn in si buuxda looga gudbo fayraska dillaaca, laakiin qoraalka ah Dhacdada 201 coronavirus layli durbadiiba halkaas ayuu jiray oo faafitaanka covid-19 ayaa horeyba loogu muujiyey khariidadaha adduunka ee quruxda badan ka hor inta aan si rasmi ah looga helin suuqa. Waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn geerida beenta ah ama infekshannada faalsada ah. Mise taasi waa suurtagal? Haddayse sidaa tahay, maxay cadaabta u fulin lahaayeen taas?
Marka aynu u qaadanno uun in fayrasku run ahaantii jiro. Waxaan wali hubin inay asal ahaan asal ahaan ka timid ama laga yaabee in lagu qaabeeyo shaybaar isla markaana si shil ah looga baxsaday ama loogu faafay sidii bayoolaji ahaan. Aynu soo qaadanno ikhtiyaarka hubka noolaha (kaliya tijaabada fikirka). Haddii ay jiri lahayd dawlad ama koox argaggixiso oo sidan samayn lahayd, weligaa ma ogaan doontid, maxaa yeelay dib looma raadsan karo. Waxa kaliya oo aan ognahay waa in Bill Gates uu dib u sheegay sanadkii 2017 in masiibada soo socota ay ka imaan karto shaashad kumbuyuutar ah (eeg halkan).
Waxaan aragnaa tiro yar oo la yaab leh oo infakshan ah (oo kaliya kumanaan ka badan boqollaal milyan), laakiin sheegashada ayaa ah inay jirto koror macquul ah oo ka dambeeya coronavirus iyo in kasta oo ay yar tahay tirada cudurrada bilowga, toddobaadyo yar kadib. noqdaa mid aan la xakamayn karin. Haddii taasi marwalba la yiraahdo, habka Nederlandka ee ku faafay cudur faafinaya oo 60% dadka ay qasab tahay inuu ku dhaco cudurka si looga hortago gubashada talaalku waa wax qariib ah. Mark Rutte wuxuu wacay xasaanadda kooxda.
Marka waxa aad ogtahay waqti uun inay gaarayaan qarax aan la xakamayn karin ayaa kuu oggolaanaya inaad dib u dhigto faafitaanka fayraska oo aadan helin qodobka loo baahan yahay? Waxay sidoo kale ku adeegsadaan qaabkan Boqortooyada Midowday. Wadamada kale waxay u socdaan xiritaan guud. Waxay u muuqataa in qaabkan labbiska midaysan uu dhowaan noqon doono sabab loo la yimaado qaab aan la isku halleyn karin oo ku saabsan cabbir caalami ah. Waxaan horey u aragnay baaqaas loogu talagalay dowladda adduunka marka loo eego tallaabooyinka cimilada.
Qof kasta oo akhriya buuggayga waxaa laga yaabaa inuu gartay in markii aad siyaasad iyo siyaasad jeebkaaga ku jirto aad sidoo kale leedahay shabakad ballaaran shaqaalaha tanaasulay bulshada dhexdeeda (oo ku siinaya dammaanad dakhli), ayaa ugu wanaagsan in la xajisto. GDR-ka hore, marka loo eego tirooyinka rasmiga ah, 1 ka mid ah 50 qof ayaa sidaas ahaa Inoffizielle Mitarbeiter. Kama saari karno suurtagalnimada in dawladuhu awood u leeyihiin inay wax xayiraan, iyagoo adeegsanaya farsamooyinka dacaayadda oo ay weheliso warbaahinta iyo dadka hela lacag dheeraad ah. Waxa kaliya ee aan ku soo gunaanadi karno waa in dowladaha ay u baahdeen xiisaddan.
Waxay ku dhowdahay inay timaado. Waxaan qoray waqti dheer kahor qalalaasahan maqaalkani taas oo aan ku caddeeyey in raasamaalnimadu ay ahayd khariidadda caqliga leh ee loo maro wadaaga. Tani waa sababta oo ah bangiyada dhexe ayaa daabacay buur aad u weyn oo lacag ah taas oo xumbada deynta ('wax kasta oo xumbo') ay noqotay mid aan la sii jiri karin. Lacagtaas la daabacay, lacagta ayaa la amaahiyey dad badan oo aan dulsaar lahayn dulsaar ahaan eber ah. Kadib, bangiyadii dhexe ayaa dib u iibsaday dammaanadaha deyntaas (bond). Shirkadaha waaweyn sidaas ayaa lasiiyay lacag aad u badan si ay ugu iibsadaan kuwa kula tartamaya iyo sare u qaadida qiimaha saamigooda (iyagoo iibsanaya saamiyadooda).
Sicirka suuqyadu si dabiici ah ayey u sarreeyaan, taasoo u muuqatay inay si wanaagsan dhaqaale ahaan ugu socoto. Waxa ka sii muhiimsan, hase yeeshe, waxay ahayd in shirkadahaani ay weynaadaan oo sii ballaaraan, halka shirkadaha aan mudnaanta lahayn ay hoos u dhacday (maxaa yeelay lacag ma aysan helin). Burburinta dhaqaalaha, dawladaha ayaa hadda iibsan kara oo sumayn kara shirkadahaas. Hadana sida ugu dhaqsaha badan ayaad naftaada ugu helaysaa waxa aan ugu yeedhnay wadaagis.
Waxa ugu dambeeya ee aad ku doonayso nidaam hanti-wadaag waa ganacsato madax-bannaan. Waxaad dooneysaa in qof walbaa helo daqli asaasi ah oo uu si wanaagsan ugu ciyaaro dheelitirka xeerarka gobolka soo rogay. Muxuu qabtay gobolka Nederland (tusaale ahaan) mid ku soo dhacay hoos u dhac maalmihii ugu dambeeyay? Qof kastaa wuxuu joogaa guriga oo si buuxda ugu tiirsan taageerada dawladda. Tobanaan balaayiin ah ayaa si lama filaan ah loogu heli karaa si loo siiyo qof walba dakhli aasaasiga ah. Ma u malaynaysaa wadaagitaan? Taasi waxay u muuqataa inay ku taal dhinaca wanaagsan ee wadajirkaas. Fikradda shuuciga ayaa aragti ahaan aad u qurux badan.
Gobolku wuxuu hada kufakhi karaa dhamaan wajiyada wadajirka usbuucyo gudahood natiijada ka dhalatay dillaaca coronavirus. Urtaasi miyay u egtahay qorshaynta?
Waan ogahay Waxaad u maleyn doontaa in wasiiradeena Dutch-ka qaaliga ah iyo marwalba farxada leh Mark Rutte aysan waligood ka shaqeyn doonin qorshe noocan oo kale ah. Hagaag markaa waxaan ku weydiinayaa: Sideen uga hadli karaa qoraalka sayidka ah ee u halgamaaya nidaamkan naxariis darada ah? Sidee baan u saadaaliyay saxda ah?
Waxaan sidoo kale ognahay wajiga mugdiga ah ee wadaaga. Tan waxaan ka ognahay midowgii Soofiyeeti hore, GDR, Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Ma ogeyd inaad hada aragtid isla wajiga mugdiga inta uu socdo dillaaca coronavirus? Waxaan aragnaa inqilaab militari oo lagu fulinayo dadka ku nool dhowr dal oo Yurub ah iyo Mareykanka. Waxaa nalooga saaray xidhitaan dhammaystiran. Wali kuma joogin Nederland, maxaa yeelay Netherlands iyo Boqortooyada Midowday waa inay muujiyaan in qaabkooda sifiican uusan u shaqeyneynin. Ficil ahaan, tani waxay la macno tahay in wadarta xiritaanka ee Nederland iyo Boqortooyada Ingiriiska ay imaan doonto wayna ka adkaan doontaa marka loo eego France iyo Spain. Waxaan arki doonnaa wajiga mugdiga ah ee shuuciyada waxaana lagaaga iibinayaa sidii daruuri u tahay sababtoo ah waxaad aaminsanahay faafitaanka viruska.
Waxaan ku sharaxay viruska dhabta ah ee ku jira buuggayga: 'fayraska weyn ee inaga dhigaya xaqiiqooyin been ah". Waxa kale oo aan saadaaliyay buuggaas inuu jiri doono aafo kale. Fayraska dhabta ahi waa isku-duubnaanta guud ee dadka ku dhaqan warbaahinta iyo siyaasada.
Tallaabooyin noocee ah ayaan ku qaadi doonaa qiyaasahayga:
Xarumaha militariga iyo booliiska
Waajibaadka in la raaco "tilmaamaha iyo tilmaamaha" (raac amarrada)
Sirta basaasnimo (isqarxintaada), adoo raacaya ogaanshaha dadka cudurka qaba ama kuwa aan dhawrin amarrada)
Soo sheegida waajibka
Yaraanta lacagta iyo safka safaaradaha dawlada ee 'kaalmeeya'
Mamnuucidda adeegsiga mashiinnada lacagta iyo mashiinnada lacagta oo aan lacag dambe siinaynin
Karantiil guriga khasabka ah
Waajib in la yimaado si karantiil dibadeed ama xabsi loogu diro dadka aan asluubta laheyn (dadka aan dhageysan “jihooyinka” ama aan laheyn sabab wanaagsan oo lagu maro wadada)
Soo qaadida dadka falanqaynta xog waaweyni muujinayaan inay suurta gal tahay inay yihiin fallaago
Baadhitaan caafimaad oo khasab ah
Codsiga khasabka ah si uu kuu kormeero meel fog
Tallaalka qasabka ah
In maqaalkani Waxaan sharraxay macluumaadka asalka iyo cawaaqibka tallaabooyinka noocaas ah. Miyaad aqoonsan tahay waxyaabo gaar ah oo aan ka ognahay wada-noolaanshaha Midowgii Soofiyeeti, GDR, Woqooyiga Kuuriya iyo Shiinaha? Markan waa hal laf oo ka xun. Waxaan ugu yeeraa "wadaagida farsamada." Taasi waa wadaagis taas oo tikniyoolajiyadu door muhiim ah ka ciyaarayso wax walbana lagala socon karo xarumaha dhexe ee dawladda. Taasi waa waxa aan horayba uga ogaanay Shiinaha oo hadda lagu dardar gelinayo Yurub iyo Mareykanka iyada oo loo sii marayo cudurka 'coronavirus hype'.
Maxaa dhacaya haddii aadan iskaashi la yeelan? Markaa waa laga yaabaa in lagugu xidho oo waa lagugu qasbi doonaa. Dhamaan shuruucda ayaa la meel mariyey sanadihii la soo dhaafay si looga dhigo "daryeelka" khasabka ah. Ficilka khasabka ah ee daryeelka caafimaadka maskaxda ayaa la hawlgaliyay 1 Janaayo 2020. Waxaan taas uga digay sannado badan oo xitaa waxaan sameeyay codsi la saxeexay in ka badan 5000 jeer. Waxba kama taro. Marka la eego golaha Rutte ee hadda jira, sharciga si fudud ayaa loo meel mariyey.
Maxaad weli sameyn kartaa? Miyay fiicnaan laheyd inaad si xariif ah kugu dhaafi karto ka dibna ku noolaato nidaamka shuuciga ah ee shuuciga ah, adoo rajeynaya inay arrimuhu mar uun xoogaa xiiso yeelan doonaan? Ugu dambeyntiina, waxaan jecel nahay in wax walba nalagu diyaariyo. Ugu dambeyntiina, waxaan sidoo kale jecel nahay inaan helno dakhli aasaasiga ah. Sidookale way fiicantahay inaadan shaqeynin asbuucyada soosocda.
Taariikhdu waxay baratay in nidaamyada isugeyn ee wadarta ahi ay horseedaan cadaalad-darro guud. Marka su'aashu waxay tahay inaad dooratid fududeynta iyo laab-jabka muddada gaaban ama inaad tixgeliso saameynta muddada-dheer.
Buuggayga ayaan si faahfaahsan ugu sharraxayaa waxa uu yahay '' master script '. 'Qoraalka' Master '' horay ayaa loo sii saadaaliyay wax walbana way soo baxayaan. Waxaan sidoo kale ku tusi doonaa xulashooyinka muhiimka ah ee ay tahay inaad sameyso (talooyinka wax ku oolka ah). Doorashada ugu muhiimsan ayaa la sameyn karaa oo keliya haddii aad ku aragto ciyaarta oo dhan min A ilaa Z. Kuma saari karo taas 1 maqaal, laakiin waxaan gelin karaa 134 bog. Mar dhow ayaa sidoo kale nooca Ingiriisiga ah. U qaad naftaada oo ogow waxa adiga kugu habboon. Buuggaygu wuxuu ku dhammaanayaa war wanaagsan iyo tilmaamaha ugu muhiimsan ee weligey la adeegsado, laakiin in hal sadar lagu soo koobo waxay noqon doontaa nuxurka Marka waxaad ka heli doontaa talooyinka kaliya ee dhabta ah ee buugga ku jira. Waxaad ku aqrin kartaa 1 maalin gudaheed. Gaaban laakiin macaan. Halkan ka akhriso
Iibsiga buuggaaga waxaad sidoo kale taageertay shaqadayda si aan u sii wado. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan kuugu yeerayo inaad xubin ka noqotid, sababtoo ah taageeradaada waa mid joogta ah oo aad muhiim u ah. Sidoo kale waa muhiim inaad la wadaagto qodobbada, si aan u gaarno tirada ugu halista badan. Waxaad qayb ka noqon kartaa saamaynta shaybaadhka ee fayraskan anti-hysterics. Waxaad awood u leedahay taabashada badhanka.
Baro waxa la sameeyo iyo waxa la sameeyo xiritaanka coronavirus soo socda
Fayraska Corona, oo loo gaabiyo soo afjaridda kaashka iyo saamaynta dhaqaale adduunka oo dhan
Saadaasha Heerka: Kalsooni been abuur ah oo kaash ah
Doodda warbaahinta bulshada: aalad lagu aqbalo talaabooyinka karantiil ee coronavirus ee gobolka?
Tags: tilmaamaha, lacag caddaan ah, wargelinta, lacag caddaan ah, coronavirus, Covid-19, jiran, featured, geld, tilmaamaha, raasamaal, xirid, tallaabooyin, sumadda, dawlad, praktische, Rutte, gobolka, taageero, xirmooyinka taageerada, te, talooyin, wat
18 Maarso 2020 at 14: 19
Muxuu ogyahay Willem Alexander?
Boqorka Boqortooyada Willem-Alexander ayaa furay bandhig '' LA SAMEE! 'Subixii Arbacada, Abriil 15. ee Rijksmuseum Boerhaave ee Leiden. Bandhigu wuxuu ku saabsan yahay cudurada faafa sida daacuunka iyo furuqa iyo sida ay u carqaladeyn karaan nolosha.
18 Maarso 2020 at 15: 32
Oo sidaasay u socotaa carruurta .. xukunnada guud ee loogu talagalay kuwa yaryar.
Raac tilmaamaha: Befehl is befehl!
Jadwalka 'Covid-19 ee ardayda':
19 Maarso 2020 at 17: 14
Tilmaanta 1) Quraacda koowaad, ka dib maydhashada ka dibna iska qaad dharka 'jojamas', waxay noqon kartaa kiiska in qofka dhallinta yar ee maskaxda laga gooyay iyo waalidkood ay sidan sameyn doonaan.
18 Maarso 2020 at 19: 27
Hadda waa wixii ka dambeeya 19.00-da fiidnimo oo waxaad maqli kartaa dhawaaqyada dhawaaqa kaniisadda. Kaniisadaha wali ma jiraan oo wali ma furan yihiin waqtigan? Saacaddan? Miyay ujeedadu tahay in dadka lagu cabsi galiyo moodada, ha la ilaaliyo? Waan fiirin doonaa, albaabka u baxo oo aan lahadlaayaa labo haween ah waxayna cadeeyeen in dhowr usbuuc, usbuuc kasta, gambaleelku u dhawaaqi doono sababo la xiriira cudurka 'corona virus' !!!
Waxay aad ugu fogaadaan cudurka sambabka ee loo yaqaan 'psyop riran hypnosis'.
Hada ama waligaa “illuminati”. Jooji hadda waxaan ku iri "illuminati" caadi ha sameeyo.
Dadka run maahan waxa dhaca.
18 Maarso 2020 at 19: 51
18 Maarso 2020 at 20: 04
Dadka kormeeraya wada hadalka warbaahinta bulshada sidii shaqo-guri oo ku hadlaya magaca dawladda. Markaa waxaad helaysaa softiweer si aad wax uga sheegto waxyaabaha xun ee isaga ah oo aad difaaceyso ajendaha gobolka meel kasta oo magaca Martin Vrijland ka muuqdo. Dabcan waxaad heleysaa tababar yar taas. Taasi ma noqon kartaa? Mise habkan ayaan ushaqaynaynin? Xaq ma leh Taasi waa shirqool kale oo waxashnimo ah ... yuck
18 Maarso 2020 at 21: 17
Mudanayaal iyo marwooyin (si wanaagsan) waa inaanad mar dambe dhihin sidaas) .. caddeyn! Tan laguma dhaqmayo. Waxaan ku celcelinayaa taas wax laga qaban maayo. Taas looma dhaqangelin karo, sababta oo ah wasiirraduhu kuma dhaqmaan
18 Maarso 2020 at 21: 27
Waxaan xiiseyneyaa in adoo ah sarkaal bilays ah ma aha inaad xidhatid maaskaro waji. Miyay u adkaysi u yihiin fayraska mise waxay ogyihiin in halista virusku uu yahay wax aan macno lahayn?
18 Maarso 2020 at 22: 01
NOS news maanta .. "Suuqyada waawayn waxay rabaan in laga mamnuuco bixinta lacagta" oh nin waa iska cadahay qoraalkaan la soo baxayo ..
18 Maarso 2020 at 23: 50
Kaliya sug doorashooyinka cusub oo u codee xisbiga ka soo hor jeeda ha ha
Ha iloowin, majiro wax la mid ah oo runtii codeeya oo nidaamka kujira.
Kooxda ka soo horjeedda waxay muddo dheer kala tashanayeen Johan Cruiyff sida ay ciyaartu u dhacday / ay u aadi laheyd hihihi, foeballuher wanaagsan oo uu u lahaa Johan 😉 wuu yaqaanay sidaas darteedna wuxuu oran karaa: "waxaad arkeysaa oo keliya marka aad taas xaqiijiso"
haa waa sax!
18 Maarso 2020 at 23: 53
Ciyaarta waxaa xumay Cruyff-ka weyn, Haa !!!
Dambiil, dadkaas quruxda badan ee Rutte iyo Cruyff, jilaayaasha waaweyn
maryoes ayaa qoray:
19 Maarso 2020 at 20: 30
Sidee baan kuu wanaajin karnaa? Ido badan oo adduunka ah….
19 Maarso 2020 at 00: 25
Waqtiga ay tahay inaad aragto dadka:
19 Maarso 2020 at 00: 30
Booliisku waxay u diyaar garoobayaan seenyooyinka in xiritaan dhammeystiran laga soo doorto Nederland, xaalad ay bulshada oo dhami ku xiran tahay oo dadku ay guriga joogaan. Xaaladdaas oo kale, booliisku waa inuu xoojiyaa amarrada deg-degga ah oo, haddii loo baahdana, "muuji gacanta xoogga leh."
19 Maarso 2020 at 08: 34
Haddii aan si sax ah u fahmo, 58 qof ayaa dhintey, badankood waa da 'weyna waa bukoodeen. Iyo tiradan tirada yar, bulshada waa cabsi iyo kicin.
Dadku way tooso. Shaqaalaha bulshada ayaa ka fikiraya intaadan raacin amarradaada sare. Weydii su'aalo aadna uga nuux nuuxsocdo waxa ka sareeya asxaabtaada
19 Maarso 2020 at 17: 19
Oo ka fiirso inay taasi dhacdo, maxaa yeelay waad sugi kartaa argagaxa haddii loogu yeero 2000 kiis oo cusub ayaa lagu dari doonaa maalin. Markaa argagaxa ku jira warbaahinta iwm ayaa dadka si toos ah ugu iftiimiya in qof walbaa uu argagaxo. Ka dib xiritaanka Nederland waxaa loo soo bandhigay 10 jeer sida ugu adag sida uu hadda yahay Spain iyo France. Markaa uun waxaad heli kartaa xaalad ay dadku isku dayaan inay uga cararaan Nederland oo ay u cararaan Kuuriyada Waqooyi.
19 Maarso 2020 at 10: 51
Ikkedusik ayaa qoray:
20 Maarso 2020 at 00: 46
Martin waxaad tahay geesi. Nin aqoon badan leh. Nasiib darrose, weli waxaa jira ido badan. Dadku waxay aamminsan yihiin warbaahinta indho la’aan. Tani waxay ka dhamaan doontaa waxa loogu yeero "ciriiri". Waxaan ka baqayaa fikirkaagu inuu run noqdo. Miyaanaynaan u ogolaanayn inay wiilkan dhacaan? Tallaal ayaa loo baahan yahay. Kama fakarayo !!!!! Buuggaagu wuu socdaa. Ma sugi karo inaan akhriyo. Imminka waxoogaa dareen ah oo ka haro (ka soo bilow waxa loogu yeero corona oo dhacey)
« Wasiirka Bijleveld wuxuu ciidanku diyaar u yahay "meela badan oo xabsi ah" iyo in la ilaaliyo kala dambeynta dhibaatada cudurka coronavirus, cusboonaysiinta: xirmada kaalmada tobanaan balaayiin
Waxyaabaha layaabka leh ee ku saabsan 'Coronavirus panic' ee Dr. Wolfgang Wodarg? »
Guud ahaan Wadarta: 1.418.432